Nihaino An’ireo Porofo Fanampiny ny Fitsarana Tampony ny Andro Fahefatra
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Italianina Tiorka Tseky Tsonga Vietnamianina Yorobà Zoloa
12 APRILY 2017
NEW YORK—Androany ny andro fahefatra nihainoan’ny Fitsarana Tampon’ny Federasionan’i Rosia an’ilay raharaha momba ny Vavolombelon’i Jehovah. Be dia be no nanatrika azy io. Nodinihina tamin’izany ny fangatahan’ny Minisiteran’ny Fitsarana hoe hofoanana ny Foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia. Efa hariva be ilay fitsarana vao nirava, ary hitohy indray amin’ny alarobia 19 Aprily 2017 amin’ny 10 ora maraina.
Ireo mpisolovavan’ny Vavolombelon’i Jehovah no nanomboka ny fitenenana, ka nanome porofo maromaro hiarovana an’ilay foibe. Taorian’izay, dia nametraka fanontaniana tamin’izy ireo ny mpisolovavan’ny Minisiteran’ny Fitsarana. Rehefa avy naheno ny porofo naroson’ireo mpisolovavan’ny Vavolombelona ny mpitsara, dia nanontany an’ireo mpisolovavan’ilay Minisitera hoe inona no antony araka ny lalàna hanafoanana ny Foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah. Tsy nahita holazaina izy ireo ary tsy voavaliny koa ny fanontaniana hafa napetraka taminy. Nifarana ny fitsarana, rehefa avy nihaino ny tenin’ireo vavolombelona avy amin’ny andaniny sy ny ankilany ny mpitsara.
Tokony hanomboka handinika an’ireo antontan-taratasy momba an’ilay raharaha ny fitsarana, amin’ny herinandro ambony.
David Semonian, Biraon’ny Filazam-baovao +1-845-524-3000